Xarunta nabadda & horumarinta oo baaq ka soo saartey colaada gobolka Mudug – SBC
Xarunta nabadda & horumarinta oo baaq ka soo saartey colaada gobolka Mudug
Posted by editor on July 6, 2011 Comments
Baaq oo ka soo baxay xarunta nabadda & horumarinta Soomaaliya ayaa loogu baaqay beelaha ku dagaalamaya gobolka Mudug inay nabad ku badalaan colaadaasi. baaqaasi ayaa u qornaa sidan
Xarunta Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliyeed(CPD) ee fadhigeedu yahay magaalada Gaalkacyo waxay baaq nabaddeed u diraysaa beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhexmartay deegaanka Dhagatuur ee gobolka Mudug.
CPD waxay dhamaan Waxgaradka iyo Odayaasha beelaha dirirtu ku dhexmartey deegaanka Dhagatuur ka codsaneysaa in ay dajiyaan colaada iyo dhibaatada kala gaartey beelaha walaalaha ah.
Xarunta Nabadda iyo Horumarinta iyadoo ka xun dhibaatadii kala gaartey beelaha walaalaha ah ee deegaan wadaaga ah waxay tacsi tiiraanyo leh u diraysaa dhamaan qoysaskii dhibaatadu ka soo gaartey colaadii dhacdey todobaadkan taasi oo ay ku naf waayeen in badan oo ka mid ah bulshada labada dhinac ee dirirtu dhexmartey.
Waxay xarunta CPD ku baaqeysaa in labada dhinac ay Xabadda Joojiyaan isla markaan qaataan nabada kana shaqeeyaan xasilooni kuwada noolaanshaha iyadoo loo baahan yahay in dhinac walba uu kan kale u tanaasulo, maadaama colaad aysan faa’ido laheyn oo uusan wiil ku dhalan in uu ku dhinto mooyee.
Xarunta Nabadda iyo Horumarinta waxay sidoo kale soo dhoweyneysaa talaabo kasta oo looga shaqeynayo sidii beelaha dirirtu dhexmartey la isugu keeni lahaa isla markaana lagu wada hadalsiin lahaa iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo dhalin kara colaad.
Ugu dambeyn xarunta Nabadda iyo Horumarka CPD ee fadhigeedu yahay magaalada Gaalkacyo waxay Issimada iyo Waxgaradka Gobolka Mudug ugu baaqeysaa in ay fadhiga ka kacaan oo ay kala dhex galaan beelaha dirirtu dhexmartey kana shaqeeyaan Sidii wadahadal loo furi lahaa.
COLAAD WIIL BAA KU DHINTE EE WIIL KUMA DHASHO.
WADAHADAL IYO ISU TANAASUL AYAA NABAD LAGU GAARAA.
Agaasimaha Xarunta Nabadda & Horumarinta (CPD)
Dr. Mohamed Ali Yuusuf (Gaagaab)